Abakhiqizi Bolwazi - IntoKildare
Ukudla kunendawo ekhethekile ezinhliziyweni zethu (nezisu!). Abakhiqizi bokudla abaphezulu base-Ireland bazinze e-County Kildare.
Ufuna ukusampula ukudla neziphuzo zesifunda okutholwe endaweni? IKildare inebhizinisi ezahlukahlukene ezahlukahlukene ezakha umkhiqizo omuhle kakhulu wendawo.
Kusuka koshokholethi kuya kubapheki, ukudla okutshalwe ekhaya esizeni kanye nokuningi okusanda kubhakwa - iKildare yipharadesi labathandi bokudla.
Ama-greengrocers aphethwe ngumndeni, i-delicatessen nesitolo sekhofi esinikezela ngezithelo ezisezingeni eliphakeme, imifino nezinye izidingo zokudla.